चरित्र प्रोफाइल - वारिक अर्चेन्जेलो - पालना दृश्य
वारिक GANGSTA - चरित्र प्रोफाइल
by फ्रेंकी 19th नोभेम्बर 2020 9th जनवरी 2022
1 टिप्पणी चरित्र प्रोफाइलमा - वारिक अर्चेन्जेलो
अवलोकन - चरित्र प्रोफाइल वारिक आर्चेन्जेलो
वारिक आर्चेन्जेलो हाम्रो तीन मुख्य चरित्र ग Gang्ग्स्टामा दोस्रो चरित्र हो र निकको तुलनामा योद्धाको भन्दा एक वार्ताकारको रूपमा काम गर्दछ। यद्यपि उनी ह्यान्डगन बोक्छन्, उनले सामान्य रूपमा सबै कुराकानी गर्छन् निकको विपरीत।
शृ .्खलामा एक महिलाको रूपमा चित्रण गरिएको छ, दुबै परम्परागत आकर्षक र मनमोहक, उनी सबै कुराकानी गर्छन् र सामान्यतया निक भन्दा फरक परिवर्तनमा संलग्न हुँदैनन्। म भन्छु कि ऊ एक बहिर्गन हो र यसले सामान्यतया उसलाई सजिलैसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ र यसले अन्य पात्रहरूलाई हेरचाह गर्न सजिलो बनाउँदछ। ओह, उहाँ एक भारी धुम्रपान गर्ने पनि हुनुहुन्छ, यदि तपाईंले ध्यान गर्नुभएन भने।
उपस्थिति - चरित्र प्रोफाइल वारिक आर्चेन्जेलो
वारिक आर्चेन्जेलो चरित्र प्रोफाइल
वारिक अग्लो छ, यसको गोरो कपाल छ जुन उसको काँधबाट पनी तल पुग्छ र एक मजबूत निर्माण। उसको दाहिने आँखा काम नगरीएको छ र साधारण कालो आँखा प्याच प्रयोग गरेर उसले यसलाई कभर गर्दछ। उसले सामान्यतया कालो पतलून, ज्याकेट र कहिलेकाहि निलो वा कालो शर्ट लगाउँदछ।
उसको बाहिरी रूप एकदम साधारण छ र उसको आँखा बाहेक उसको बाहिरी रूपको बारेमा त्यहाँ उल्लेखनीय वा महत्त्वेपूर्ण केहि छैन। उसको निलो आँखा र सामान्यतया कपाल मुहारको साथ केही अनुहारको कपाल हुन्छ। उसको कपडा र बाहिरी रूप वास्तवमै पूरै श्रृ series्खलामा परिवर्तन हुँदैन र यो निश्चित रूपमा निकोलससँग समानान्तर हो किनभने मलाई निकै पक्का विश्वास छ कि वारिकले लगाएको वा त्यस्तै अन्य जस्तो निकोलसले मात्र प्रतिलिपि गर्दछ।
व्यक्तित्व - चरित्र प्रोफाइल वारिक आर्चेन्जेलो
वारिक ज्यादै आत्मविश्वासवान हुन्छन् र कुनै पनि कुराको लागी डराउँदैनन्, यदि यो एक महत्त्वपूर्ण दृश्य खतरा भए पनि। यसले स्पष्ट रूपमा उसको चरित्र शान्त र पूर्वमा आउँदछ, साथै आकर्षक पनि बनाउँदछ। उसले सामान्यतया आकर्षणलाई आफ्नो आभामा समाहित गर्दछ र सामान्यतया यो व्यक्तित्व कहिल्यै भंग गर्दैन। जब ऊ गर्छ, ऊ कठोर, हिंस्रक र डरलाग्दो बन्न सक्छ। यद्यपि उसले गरेको कार्यहरू निकोलस भन्दा फरक पूर्वानुमान योग्य छन्।
उहाँ मेरो रायमा औपचारिक हुनुहुन्न र औपचारिक निकाय र अन्य व्यक्तिलाई खुल्लमखुल्ला चुनौती दिनुहुन्छ जसलाई तपाईं पुलिस शिफ र माफिया मालिकहरू भन्दा उहाँभन्दा “उच्च अप” ठान्नुहुन्छ। सम्भवतः यो तथ्यलाई तल हो कि उसलाई थाँहा छ कि निकोलसको संरक्षण र उसको बिभिन्न सम्पर्कहरूका कारण ऊ आंशिक रुपले अस्पृश्य छ OCG को र पुलिस निकाय जस्तै ECPD.
ईतिहास - चरित्र प्रोफाइल वारिक आर्चेन्जेलो
[एपिसोड,, सीजन १, वारिकले उसको आँखा हराउँछ]
ईतिहासको हिसाबले वारिकको चरित्रको कुनै अभाव छैन। उसको प्रारम्भिक चरित्र (एनिमेमा) फ्ल्यासब्याक, सम्झनाहरु को रूप मा गहिरो दिइएको छ र ब्रह्माण्ड कुराकानी मा उल्लेख। म चरित्रमा कत्तिको विकास र ब्याकस्टोरीको अर्थ हुन्छ भन्नेमा म जोड दिन सक्दिन र यसले श्रृ a्खलाको चित्रणको तरीकामा यसले कसरी असर गर्छ।
जस्तो म भन्छु, तपाईंसँग उत्कृष्ट, रमाईलो मौलिक र मायालु पात्रहरूको साथ एक अद्भुत श्रृंखला हुन सक्छ, तर यदि तिनीहरूसँग गहिराइ छैन, कुनै इतिहास छैन, कुनै उद्देश्य छैन र तिनीहरूलाई कुनै ड्राइभिंग छैन (तिनीहरूको विगतका कारण) हामी किन देख्न सक्दैनौं किन तिनीहरू त्यसो गर्छन्। चीजहरू उनीहरूले गर्छन् र त्यसैले तिनीहरू केवल यी वर्णहरूसँग तुलनात्मक छैनन्। धन्यबाद वारिक्सको चरित्रलाई धेरै गहिराइ दिइयो र म यसको लागि धेरै आभारी छु। मलाई पक्कै थाहा छ यो टिभीलाईटको कथा सेट गर्नु आवश्यक थियो र कसरी वारिक र निकोलसले एक अर्कालाई पहिलो स्थानमा चिने, तर यो अझै पनि मलाई हेरेर बसेको थियो र म खुशी छु कि यो उपस्थित छ।
वारिक आश्रययुक्त जीवन बिताउँछन् जसलाई शरीर रक्षकहरू र चाकरहरू द्वारा सुरक्षित गरिएको छ, यो पनि त्यहि हो जहाँ उहाँ भेट्नुहुन्छ निकोलस ब्राउन। यहीं उहाँ र निक भेट्नुहुन्छ र यिनीहरू कसरी यति नजिक आउँछन्। निकोलस वारिकलाई बचाउनका लागि बनेको छ, अर्को शब्दमा उसको करार उसको जीवनसँग बाँधिएको छ र ऊ निकै प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्दछ यद्यपि ऊ वारिकको जस्तै उमेरको भए पनि ट्वीगलाईट्स मानिस भन्दा छोटो जीवन अवधि हुन्छ त्यसैले तपाईं निक भन्न सक्नुहुन्छ। वारिक भन्दा पुरानो हो, तर तिनीहरूको उस्तै मानसिक उमेर छ।
वारिकको परिवारको हत्या भइसकेपछि ऊ निकसँग अर्गस्टुलम सर्छ जहाँ ऊ कहिले काँही बाल पुरुष वेश्याको रूपमा काम गर्दछ। धनी अर्चेन्जेलो परिवारको हिस्सा भएको कारण यो पहिले हुन्थ्यो जहाँबाट उनी धेरै टाढा छन्, हालको पहिलो घटनाहरू जुन वारिक उसको जीवनमा “अहिले” छन। यसैले वारिक आर्चेन्जेलो परिवारको एक्लो जीवित व्यक्ति र परिवारसँग नजिकको नजिकको सही रक्तरेखा हो।
तपाईं हाम्रो (GANGSTA) anime gangsta season2लेख पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
चरित्र चाप | चरित्र प्रोफाइल वारिक आर्चेन्जेलो
त्यहाँ वारिकको चरित्र चापको हिसाबले धेरै कुरा थाहा छैन र यो त्यहाँ एक सीजन मात्र उपलब्ध छ। हामी के हेर्न चाहन्छौं तर वारिकको विगत हो र त्यसकारण उसको चरित्र उसको जीवनको एक ठाउँमा कहाँ थियो भन्ने बारे हामीले केही हदसम्म बुझ्न सक्दछौं (१ 16 वर्षको उमेरमा (मलाई लाग्छ)) जहाँ उनी अहिलेको शृंखलामा छन। यद्यपि यो चरित्र चाप भन्दा धेरै छैन, यसले हामीलाई वारिकको चरित्र उसको जीवनको एक समयमा कहाँ थियो र अहिले उनी कहाँ छ भन्ने बारेमा एक महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अन्तर खाली भएको (उसको चाप) बीचको समय हो।
वारिक एक किशोरी बनाम को रूपमा वारिक वयस्कको रूपमा।
वारिकको चरित्र चाप विशेष गरी एनिमेमा रोचक छ। यद्यपि एनीम केवल वार वारिकमा जान्छ, हामी उनको चरित्र चाप anime मा शुरू पाउन सक्दछौं जे भए पनि कम छ। इतिहास केवल यहाँ उत्पादकहरूको चासो जस्तो देखिन्थ्यो र त्यो anime मा धेरै राम्रोसँग सकियो। वारिक र निक बीच कहानी anime मा अधिक गयो किनकि यो कत्तिको महत्वपूर्ण छ।
GANGSTA मा चरित्र महत्व। | चरित्र प्रोफाइल वारिक आर्चेन्जेलो
वारिकले गANG्गस्टामा ठूलो उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ र उहाँविना यो श्रृंखला सामान्यतया जान सक्दैन। श्रृंखला पछाडि कथाहरूमा मुख्यतया दुबै वारिक र निकोलस समाहित हुन्छन् र ती दुवै मध्ये एक बिना यो समान हुँदैन। यो किनभने तिनीहरू यति राम्रो सँगै काम गरीरहेका छन् उनीहरूको ईतिहासमा। सामान्यतया निकोलसले वारिकलाई आज्ञा मान्नु पर्छ र उसले भनेको मान्दछ यदि उसले सीधा आदेश दिन्छ तर कहिलेकाँही उसले त्यसो गर्दैन। यो मेरो ज्ञानको कारण हो, वारिक निकोलसको ठेकेदार हो, त्यसैले निकोलसले वारिकलाई जे भए पनि र कुनै पनि परिस्थितिमा सुरक्षा गर्नु पर्छ, चाहे ऊ गलत छ भने पनि, जे होस् ऊ जे होस्। f
टैग: एनिमे anime charactersgangsta animegangsta animegangstacharacters animegangstawarrick animegangster animegansterwarrick कैरेक्टरनिमेगang्गस्टा gangstaanime characters warricanime चरित्र warricanimeganster warrikarcheneglo gangsta बाट warrick warrickgangsta
अघिल्लो प्रविष्टि GANGSTA। - किन एक सीजन २ सम्भव छ
अर्को प्रविष्टि चरित्र प्रोफाइल - निकोलस ब्राउन